Tuesday, 1 May, 2018 5:05 PM
आज मे १, विश्व मजदुर दिवस । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मजदुर दिवस मनाइयो । मजदुरहरु आन्दोलनमा रहेका बेला अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा ४ मे १८८६ मा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता हाँसिल गर्यो । र, सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको १ मे मा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो ।
विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा ००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीसँग न्यूजसेवाले मजदुर दिवस, नेपालमा मजदुरको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वबारे कुराकानी गरेको छ ।
तपाई केही समयअघि तपाईं अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । मजदुर दिवस मनाइरहँदा अहिलेसम्म मजदुर आन्दोलन, अहिलेको अवस्थालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ?
नेपालमा मजदुर अधिकार सेवा सुविधाको बिषयमा व्यवस्थित कानुन निर्माण गर्ने पाटोबाट हेर्दा अहिले आएको तेस्रो श्रम ऐन हो । कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धि ऐन २०१६ भन्ने थियो । पञ्चायतकाल भरि नै त्यो ऐन अगाडी बढ्यो । पञ्चायतकाल कस्तो थियो हामीले धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन । माग राख्ने कुरा, स्वतन्त्रताका कुराहरू बन्देज थिए । पछि ०४८ मा श्रम ऐन आयो । त्यसले मजदुरले काम गर्ने संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाईं मात्र समेटेको थियो । हामीले संगठित क्षेत्रका १० प्रतिशत मजदुरलाई समेटेर आन्दोलनहरु गर्यौँ । ९० प्रतिशत असंगठित मजदुरको लागि त्यो कानुन थिएन । ४८ को श्रम ऐनमा भएका अधिकारलाई हेर्दा हरियो घाँस देखाएर खसी काट्न लगिएजस्तो बुझेका थियौँ । हामीले त्यसको बिरोध गरेका थियौँ । मजदुरलाई धेरै अधिकारलाई त्यसले कटौती गरेको छ ।
०६२–०६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रकियापछि हामीले यस ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्यौँ । हामीले मागपत्र पेश गर्यौँ । त्यो मागपत्र पेश गर्दा हामीले मालिकको पैतृक सम्पती दिनुपर्छ भनेर माग राखेनौँ । हामीले उनीहरूले बनाएकै कानुनमा टेकेर माग गर्दा पनि मालिकहरू दिन नमान्ने । हामीले युद्धकालमै उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ०४८ मा लागु भएको कानुनमा मजदुरले सेवा सुविधा पाए कि पाएनन् भनेर सर्वे गर्न भन्यौ । उनीहरुले नै सर्वे गर्दा त्यो नपाएको देखियो । श्रम कानुन नै कार्यान्वयन नभएको पाइयो । धेरै अभ्यास गरियो ०६२–०६३ पछि । अहिले श्रम ऐन २०७४ जुन आएको छ, यो श्रम ऐन सँगसँगै सेवा सुविधाका विषयमा संविधानले सबै नागरिक समान हुन्छन् भनेर व्याख्या गरिरहँदा सेवा सुविधामा किन विभेद ? यहाँ वर्षौँसम्म अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा रहनुपर्ने र सानो संख्यामा मात्र स्थायी गरेर कानुन मानेजस्तो गरिदिने प्रचलन छ ।
कानुनअनुसार २४० दिनभित्र स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दा मालिक नमान्ने । सुविधा सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । त्यतिखेर हामीलाई कानुन हातमा ल्याउँछ, कारखाना चल्न दिँदैन लगायतका आरोपहरु आए । कारखाना नचल्ने अवस्था त्यतिखेर आउँछ, जतिबेला मजदुरले लामो समयसम्म उत्पिडन भोग्छ । र माग पेश गर्दा वार्ताको वातारण हुँदैन भने त्यतिबेला उद्योगमा हड्ताल हुन्छ ।
श्रम ऐन २०७४ लागु भएको छ । यसमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले ०७४ को कानुनले सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त हिजोको विभेदको अन्त्य गरेको छ । काम गरेको दिनबाटै मजदुरले नियुक्तिपत्र पाउनुपर्ने, उसले सञ्चयकोष बापतको रकम पाउनुपर्ने र उपदान बापतको रकम पाउनुपर्ने ग्यारेन्टि गरिएको छ । यो ऐनले कुनैपनि श्रमिकहरू श्रम ऐन ०७४ भन्दा बाहिर हुँदैनन् । यो ऐन सबै क्षेत्रका मजदुरलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।सबै मजदुर यसको दायरामा आउनेछन् भन्ने अहिलेको ऐनले ल्याएको छ । र पहिलेको भन्दा धेरै गुणा माथीबाट आएको छ ।
यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ?
सहि कुरा भन्नुभयो, अहिले कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा हामी ऐन आयो, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि आयो, ऐन पनि आयो । यी दुबै ऐन वा नियमावली ड्राफ्ट भएर श्रम मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ । र त्यो नियमावली आउन बाँकी छ । नियमावली आउनेवित्तिकै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । ऐन आउनेबित्तिकै व्यवसायीले आफुलाई फाइदा हुने कुरा अगाडी बढाएको हामीले अनुभव गर्छौँ । त्यसको असर परिणाममा अहिले देखिएको छैन ।
तपाईंहरु मजदुर नेता हुनुभयो, मजदुर आन्दोलनलाई हेर्दा मजदुरले नेताहरूले मजदुरको कुरामात्र गर्ने, मालिकको पीडा वास्तै नगर्ने अवस्था छ । जबसम्म संस्था चल्दैन मजदुर रहने कुरा पनि भएन । कुनै मजदुरले नपाउने, पहुँच भएको मजदुरको सेवा सुविधा बढी हुने, वास्तविक मजदुरसँग तपाईको संगठन नपुग्ने त्यो छ नि ?
तपाईले ऐन आएपनि कार्यान्वयन विभेदपुर्ण तरिकाले छ भन्न खोज्नुभयो । पहुँचको आधारमा सेवा सुविधा लिने कुरापनि राख्नुभयो तर ऐनले त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छैन । यो आरापको सिधा म कसरी खण्डन गर्छु भने, हामीले त्यहि चिज देखेर हिजोको ०४८ को ऐनले १० प्रतिशत लाई समेटेको थियो भनेर मैले सुरुमै भने । १० प्रतिशत भित्र तिनै संगठित क्षेत्रका मजदुर थिए, जसले सेवा सुविधा पाइरहेका थिए । अहिले हामीले ९० प्रतिशत जो श्रम ऐन ०४८ भन्दा बाहिर थिए, त्यसलाई ०७४ ले समेटेको छ । त्यो हामीले नगरेको भए कसले समेट्थ्यो ।
बालुवा चाल्ने , गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउने, सबैलाई समेट्नुपर्छ । अनी हामी मजदुर नेता हुन सक्छौँ । आफ्नो अधिकार थाहा नभएका मजदुरलाई पनि ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारका विषयमा पनि जानकारी गराउन पर्छ । संगठित क्षेत्रमा स्थायी भएर जे सुविधा उनीहरूले पाएका छन् त्यो सुविधाको विभेद अव अन्त्य गर्नुपर्छ । यी सुविधा तपाईले भनेजस्तै गिट्टी कुट्ने, गाडी चलाउनेदेखि सबैले पाउनुपर्छ । विभेदको अन्त्य भनेको यहि हो । हामीले नहेरेको भए, ती मजदुर कसरी समेटिन्थ्यो ? र यो कानुन कसरी आउँथ्यो ? यसकारण ०६३ को आन्दोलनको संघर्ष, हाम्रा धेरै साथिको बलिदानका कारण यो ऐन आएको छ ।
संगठित क्षेत्रका मजदुरको हकमा ज्याला दरमा परिवर्तन आएपनि असंगठित क्षेत्रका मजदुरको ज्यालामा परिवर्तन आएको छैन, उनीहरू तपाईंहरूका जस्ता संगठनमा पनि आवद्ध छैनन्, उनीहरूका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सबैलाई समेटेर आएको कानुन नै भर्खरै मात्र आएको छ । नियमावली अझै आउन बाँकी छ । ती असंगठित क्षेत्रका मजदुर जो लामो समय कामको दायराबाट बाहिर बसे, तिनीहरुलाई अहिले बनेको ऐनको बारेमा सचेत गराउने र उनीहरुलाई अधिकारको बारेमा जानकारी गराउने, तिमिहरूका अधिकार यी हुन्, ज्याला यति हुनुपर्ने हो जस्ता कुराहरू बुझाउँछौ । उनीहरूको पहिचान गरेर हामी हरेक क्षेत्रमा जाँदैछौँ । उनीहरूलाई अब विभेद हुँदैन है भनेर बुझाउँछौ । श्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली आउनेवित्तिकै हामी एक्सनमा जान्छौँ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौँ जम्मा भएको छ । यो रकम कसरी परिचालन गर्ने ? तपाईको धारण के हो ?
मेरो अनुमान अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० अर्ब रकम छ । १ प्रतिशत तलब कट्टी भएर जुन जम्मा भयो करिब १५ अर्ब भनौ न । त्यहाँ थियो भने राष्ट्रिय स्तरका प्रतिश्ठानमा बोनस बाँडिसकेपछि विशेष रकमबाट ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषयमा जम्मा गर्दा यो ३० अर्ब भएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन त आयो तर नियमावली नआउँदा अझै त्यसमा थपिनुपर्ने हुन्छ । १० प्रतिशत मजदुरको र १८ दशमलव ३३ प्रतिशत मालिकहरूको । त्यसो गर्दा २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अझै जम्मा हुन बाँकी छ । १ प्रतिशत बाहेक । त्यसो हुँदा त्यो रकम त धेरै माथि पुग्छ । अहिले त्यो रकम किन थन्केर बसिरहेको छ भन्दा त्यो नियमावलीका कारण थन्किएको हो ।
नियमावली आएपछि बल्द्यल त्यसको वितरण अथवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एक्सनमा जाने हो । हामी सकेसम्म छिटो नियमावली आइदियोस् भन्ने पक्षमा छ । नियमावली आइसकेपछि एक्सनमा जान्छ । अहिलेपनि संगठित नभएका थुप्रै मजदुर छन् । उनीहरूलाई सूचिकृत गर्नुैपर्यो । दुर्घटना भयो, बेरोजगार भयो, बिरामी भयो, बेरोजगार भयो जस्ता स्किमहरू हुन्छन् । यसरी उपभोग गर्न सकिन्छ । पहिला नियमावली आउनुपर्यो ।
मजदुर सधै मजदुर रहने तर मजदुर नेता चाहीँ मजदुरभन्दा धेरै माथि गए । अर्थात् मजदुरका नारा बेचेर बजदुर नेताले अकुत सम्पति कमाए भन्ने आरोप छ नि मजदुर नेताहरूलाई ?
मजदुर नेता मजदुर बाटै नेता भएको हो । मजदुरबाट माथी उठेरै नेता भएको हो । मैले अरूको त कुरा गर्न सक्दिन । मेरो जीवन, मेरा सहकर्मी देखि लिएर उद्योग प्रतिष्ठानमा मैले काम गरेँ । ११ बर्ष मैले तल्लो तहको मजदुरी गरेर आएको मान्छे हुँ म । सबैले हेरिरहेका छन् । म मेरो मात्र कुरा गर्छु । यदि म गलत हुँ भने मेरा सहकर्मीहरुले आलोचना गर्नुपर्छ । कुनै मजदुर नेताले आवश्यकता भन्दा बढी हाइफाइ गर्छ भने त्यसमा बिरोध र आलोचना गर्नुपर्छ । म ईकाईमा रहँदा साइकल चढेर हिँड्थे त्यो नै काफी थियो । केन्द्रमा अनी महासंघमा आएपछि मलाई देशभरको काम गर्न गाडी चाहिएला । त्यसलाई देखेर मजदुर नेता धनी भयो भन्यो भने उचित नहोला । मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागी त्यो गरेँ भने गलत हुन्छ ।
संस्था रहे मात्र मजदुर रहेने हो, मजदुरका कुरा मात्र भन्दा पनि संस्थाको हितप्रती तपाईको धारण के छ ?
मजदुर भोकै बसेर काम गर्न सक्दैन । नाङ्गै बसेर काम गर्न सक्दैन । सक्षम मजदुर खोज्ने हो भने मालिकले मैले यसलाई यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर सोँच्नुपर्छ । मजदुरले उत्पादकत्व बृद्धि गर्छ र गुणस्तरिय सामान उत्पादन गर्छ । यदि मालिकले निम्न तलबमा मजदुर खोज्ने हो भने मजदुरले उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन । घरमा बच्चा बिरामी भएका बाउआमालाई काम गराउने हो भने उनीहरुले उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सक्दैनन् किनकी उनीहरुको ध्यान काममा हैन घरमा हुन्छ । यसकारणले गर्दा त्यो कुराको संयोजन गर्ने व्यवस्थापकले हो । नकी व्यवस्थापक नाफा नोक्सान कती भयो भनेर क्यालकुलेटर दबाएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापकले आफुकहाँ काम गर्ने श्रमिकको जिवन कस्तो छ भनेर सोँच्नुपर्छ । त्यस आधारमा व्यवस्थापक हिजोबाट आज परिवर्तन हुनुपर्छ । श्रमिकले अन्याय सहेर पनि काम गर्छ । उसले मालिकको पैतृक सम्पती मागेको हुँदैन । मजदुरले विगार्यो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाई भर्खर मात्र नेतृत्वमा आउनुभएको छ, तपाईँको कार्यकालमा आम मजदुरले के पाउँछन् ?
म नेतृत्वमा आएपछि मेरो अगाडी सबै चिज नयाँ छन् । एउटा संगठनको संरचना नयाँ ढंगले बनाउनुपर्यो । हिजो केन्द्रकृत संरचना थियो । अहिले संघियतामा गयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको संरचना पनि त्यहि अनुसार बनाउनु पर्यो । अर्को कुरा हिजो हामीले ०४८ सालको श्रम ऐन प्रयोग गथ्र्यौँ भने अहिले हाम्रो अगाडी श्रम ऐन ०७४ आयो । र त्यसैगरी नयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन आयो । सबै कुरा नै नयाँ छन् । यसलाई हामी नयाँ तरिकाले मजदुरको बिचमा लिएर जाने, उनीहरुलाई सचेत गराउने कुरापनि नितान्त नयाँ भयो । र अहिले जुन कम्युनिष्टको सरकार बन्यो , यस सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्नुपर्छ । यस्तो सरकार आगामी दिनमा मजदुरले पाउँदैनन् । यस सरकारलाई बाहिरबाट हुने अप्ठ्याराहरु जोगाउँदै , बाहिरी आक्रमणलाई चिर्दै , मजदुरको पक्षमा ऐतिहासिक काम गर्नुपर्छ ।
मजदुरले यस्तो सरकार कहिल्यै पाएका थिएनौँ भन्छन् भने सरकारले पनि मजदुरका नीति, कार्यक्रम, आर्थिक योजना, अधिकारलाई उठाउनुपर्छ भनेर माग राख्छौँ । यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुनु जरुरी छ । सेवा सुविधामा विभेद नभएपछि आन्दोलन हुँदैन । कारखाना बन्द हुँदैनन् । त्यस्तो नभएपछि त्यहाँ विदेशी लगानी भित्रिन्छ । सरकारले लगानी गर्न सक्छ । जसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना मजदुरले प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसको लागी विवाद नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यान्वयन गर्दा माग राख्न नपरोस्, व्यवसायिले आफै दिउन् । यसो गर्दा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, कलकारखाना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, भन्ने कोणबाट हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझेका छौँ । अर्को कुरा यस योजना कार्यान्वयनसँगै हाम्रा अन्य मागहरु पनि छन् । समय सापेक्ष तलब पाउने हो भने दुवई, कतारमा नेपाली युवाको पाउने पारिश्रमिक यहाँ किन दिन नसक्ने ? देशका युवा परिवारसँगै बस्न पाउन् । समय सापेक्ष तलब होस् भनेर अहिलेको तलबमा हामी ५ हजार थप गर्न माग गरेका छौँ । तलब बृद्धि हुनुपर्छ भनेर माग राखेका छौंँ । त्यसैगरि बामपन्थी सरकारले मजदुरलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मजदुरको बस्तीमा जानुपर्यो । उनीहरुको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी, गिट्टी कुट्नेको जिवन हेर्नुपर्यो । सुकुम्बासी बसेका ठाँउमा डोजर लगाउने हैन उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्यो । त्यसको लागी अपार्टमेन्ट बनाउनुपर्यो । भन्ने हाम्रो माग छ ।
८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरन्जनको माग राखेर सिकागो शहरमा आन्दोलन उठाएका थिए । आज १२९औँ मजदुर दिवस मनाउँदा हामीले मजदुर आन्दोलनको रक्त रञ्जित इतिहास, अहिललेको सरकारबाट लिने अपेक्षा, र यसलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा मजदुरले व्यक्त गर्नुपर्छ । यो सरकारले मजदुरको हितमा काम गर्दैछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्यो । विदेशमा भएकाहरु यहिँ आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । यो माग हामी सरकारसँग उठाउँछौँ ।